Nezvedu - Yunhua Intelligent Equipment Co., Ltd.
Anhui Yunhua Intelligent Equipment Company(Yunhua kwenguva pfupi)
Anhui Yunhua Intelligent Equipment Kambani(Yunhua kwenguva pfupi) itsvagiro nekusimudzira kugadzira, inova kambani inogadzira tekinoroji inotengesa mabasa akasiyana emarobhoti eindasitiri.YOOHEART ndiyo yekutanga robhoti yemumba, yekutanga OEM mutengesi.
YOOHEART robhoti ndicho chigadzirwa chedu chikuru
YOOHEART robhoti ndicho chigadzirwa chedu chikuru.Semunhu ane hunyanzvi robhoti muviri uye R&D yekugadzira bhizinesi, YOOHEART robhoti inoumbwa nechikwata chedu chakakwana uye chakanakisa.YOOHEART robot ine chiyero chepamusoro-chekuita, inogona kupa vatengi vane welding, kugaya, kubata, kutsika uye mamwe mabasa akasiyana-siyana emabhobhoti emabhizimisi.
Yunhua iri muXuancheng, Anhui Province, Xuancheng ndiyo yekumaodzanyemba Anhui yekufambisa hub, Anhui-Jiangxi, Xuanhang njanji mharadzano pano, zviri nyore zvekufambisa.Kune Huangshan kumaodzanyemba, Shanghai, Hangzhou uye mamwe metropolis kumabvazuva, saka kambani yedu inonakidzwa nepamusoro penzvimbo.Iyo kambani midziyo yekumisikidza ndiyo yekutanga-kirasi yeChina.Isu tinofemesa iyo yakakosha tekinoroji, uye takazvimiririra kugadzira iyo fekitori yepakati robhoti chikamu ---RV retarder, kuwedzera kune iyo robhoti yekurwisa-kudhumhana tekinoroji uye mamwe patent.
Yunhua yakazvipira kupa epamusoro-magumo ezvigadzirwa zvemarobhoti emabhizimusi ekugadzira madiki uye epakati-kati kwemakore mazhinji, kuvandudza mwero weotomatiki uye kuderedza vashandi uye yakazara mari yekugadzira.Isu tinogona zvakare kupa masevhisi akagadziridzwa, kudzidziswa kwehunyanzvi uye yakanaka mushure mekutengesa sevhisi kune vatengi zvinoenderana nezvavanoda kuti ive nechokwadi chekuti mutengi wese anotenga zvigadzirwa zvedu anogona kuve neruzivo rwakanaka.
Yunhua robhoti ine YOOHEART brand inogona kushandiswa kugadzira, Kubata, palletizing, kupenda, kurodha uye kuburitsa, gungano nezvimwe.
Chinangwa chedu ndechekuita kuti fekitori yega yega ishandise marobhoti kugadzira kukosha kwakawanda kune vashandisi uye nzanga! Tinotarisira kushanya kwako nekushandira pamwe, tichava shamwari yako yakavimbika.
Iyo kambani inoshandisa epamberi magadzirirwo masisitimu uye kushandisa yepamusoro ISO9001 2000 yepasirese yemhando manejimendi system manejimendi.
Isu tinorambira muhunhu hwezvigadzirwa uye tinodzora zvakanyanya maitiro ekugadzira, akazvipira kugadzirwa kwemarudzi ese.
Isu tine yedu tekinoroji uye sampling kamuri iyo inogona kupa samples nekukurumidza.
Isu tinogara tichikurudzira machira matsva kune mutengi kune ref.uye kurudzira maitiro matsva akakodzera kune vatengi kuti vape kurudziro mukuvandudza kutsva.
Tine timu yedu yekugadzira iyo inogona kuchengetedza nguva yakawanda uye mutengo kune vatengi.
Nenguva refu uye yakavimbika yekugovera cheni, isu tinokwanisa kubata madiki maodha uye nzira yekuraira nemhando yepamusoro nekukurumidza kudzikisa njodzi uye stock kune vatengi.
Zvigadzirwa zvedu zvine mhando yakanaka uye zvikwereti zvinoita kuti tikwanise kumisa mahofisi emapazi mazhinji uye vagovani munyika yedu.
Kunyangwe iri pre-kutengesa kana mushure mekutengesa, isu tinokupa iyo yakanakisa sevhisi kukuzivisa iwe uye kushandisa zvigadzirwa zvedu nekukurumidza.